Maitiro ekuvhura yako iPhone ne mask uye Apple Watch | IPhone nhau
Iyo inotevera yekuvandudza ku iOS 14.5 inobvumidza iwe kuvhura yako iPhone yakapfeka mask pasina kuisa kodhi yekuchengetedza, nekuda kweApple Watch yako. Isu tinotsanangura kuti inoshanda sei, zvayakanakira nezvayakaipira.
Kubva pakatanga denda, kumeso ID yakabva pakuva yakanakisa nzira yekuvhura yekuchengetedza uye nyore, kwave kunetsa chaiko nekuti haina basa zvachose kana tavhara hafu kumeso. Zvirinani kusvika kusvika kweIOS 14.5, iyo vhezheni yatiri kuburitsa yekutanga Beta kune vanogadzira, uye izvo inokutendera iwe kushandisa yako Apple Watch kuvhura yako iPhone paunenge wakapfeka mask. Chinoshanda sei? Ndezvipi zvakanakira nekuipira? Tinokutsanangurira zvese kwauri muvhidhiyo iyi.
2 Iyo yakasununguka uye inokurumidza system
3 Asi nezvikanganiso
Chinhu chekutanga chatinoda ndechekuti yedu iPhone uye Apple Watch zvakagadziridzwa kuIOS 14.5 uye watchOS 7.4 iyo panguva yekunyora iri muBeta 1, inowanikwa kune vanogadzira chete. Iyo yekupedzisira vhezheni yezvidzo izvi haifanire kutora nguva yakareba uye inozoonekwa mune yako kifaa maseteki nekukurumidza painongowanikwa kune vese vashandisi. Paunenge iwe uchinge wagadzirisa kune iyi vhezheni (zvirinani) iwe unozogona kushandisa ino nyowani ficha iyo inobvumidza yako iPhone kuvhurwa kunyangwe ine mask pa. Asi iwe unofanirwa kufunga zvimwe zvinoverengeka zvinodiwa:
iPhone neApple Watch dzinofanira kuve neWiFi neBluetooth inogoneswa.
Isu tinofanirwa kumisa sarudzo "Vhura neApple Watch" mukati meiyo iPhone Zvirongwa, mune iyo Face ID menyu.
Zvese zvishandiso zvinofanirwa kuve zviri padhuze nepadhuze (mamwe marefu emamita maviri).
Iyo Apple Watch inofanira kunge iine yekuvhura kodhi, uye inofanira kuvhurwa uye pane yedu ruoko.
Nezvose izvi zvinodiwa zvapedzwa, kana isu tichiedza kuvhura yedu iPhone ine mask, iyo inotyisa skrini yekodhi yekuvhura haichazoonekwazve, asi tinogona kuona kuti iyo iPhone inotitaurira sei kuti yakavhurwa neApple Watch, uye paApple Watch yedu tichagamuchira chiziviso chinoratidza chokwadi ichi. Pachave zvakare nebhatani pachiratidziro chewachi yedu ichatibvumira kukiya iyo iPhone kana iko kuvhura kwave kusingadiwe.
Iyo yakasununguka uye inokurumidza system
Iko kushanda kwesisitimu ino kuri pachena kune mushandisi kana tangoimisa. Sezvandamboreva, iwe unofanira kungoiyedza uine mask uye uchaona kuti yako iPhone yakavhurwa panguva imwe chete seyako Apple Watch ruzha rwechizarira runochema uye rwunozununguka pachiuno chako. Nekudaro, pane mamiriro ezvinhu umo ino yekuzarura system isingashande, kuipa iko nekuchengetedzeka kukuru:
Kana isu restart kuti iPhone tinofanira kutanga kupinda kiinura remitemo asati kukwanisa kushandisa Face ID uye nokudaro anokiyinura pamwe Apple Watch.
Kekutanga patinoedza kuvhura foni ne mask, inotikumbira kodhi yekuvhura.
Kana iyo Apple Watch iri pamusoro pemamita maviri kure, inotikumbira kodhi yekuvhura uye iyo ID ID kana kuvhurwa neApple Watch hakushande zvakare kudzamara tapinda mairi.
Kana tikadzivirira iyo iPhone kuburikidza neruzivo runoonekwa pane yedu Apple Watch isu tichafanirwa kuisa kodhi yacho manyore kuitira kuti Face ID uye kuvhura neApple Watch ishande zvakare.
Izvo hazvishande neye Kurara modhi yakavhurwa.
Haisi iyo mhinduro kwayo iri kure nazvo. Iko kuzorodza kune avo vedu vanopedza maawa mazhinji pazuva vane mask iri, asi kune matambudziko ekuchengetedza ayo Apple pachayo anoziva. Saizvozvo haugone kushandisa ichi kuvhura neApple Watch kuti ubhadhare neApple Pay pane yedu iPhone, kana kuvhura zvinoshandiswa zvakachengetedzwa neFace ID, kana kuzadza mapassword uchishandisa iyo iCloud Keychain. Dambudziko rinouya mupfungwa ndere chii chinoitika kana mumwe munhu akanhonga foni yedu achiivhura isingasviki mamita maviri kubva pawachi yedu? Mhinduro yacho yakapusa: iyo iPhone yakavhurwa. Izvi zvine zvakawanda zvakaprindwa zvakanaka, asi zvinovhura. Mumwe munhu anofanira kupfeka chifukidzo, nesuwo, uye takatovhura iyo iPhone pane imwe nguva nayo, inofanirwa kuramba iri padyo nesu, uye hatifanire kucherechedza kurira kana kudedera paApple Watch yedu iyo iPhone yakavhurwa .
Iyo yekutanga Beta yatakaburitsa itsva yekuvhura system, saka ndinovimba ichavandudzika mushanduro dzeramangwana, semuenzaniso, kuverenga zvishoma kwechiso chedu, zvakakwana kuti chero munhu anozvitora aine mask haakwanise kuvhura. Kunyangwe nekuvandudza uku, ndinofunga kuti haisi mhinduro ichave yekupedzisira, uye Apple icharamba ichishanda pane dzimwe nzira dzekugadzirisa chinetso chemask, asi panguva ino, iyi mhinduro ndinofunga inonyatsoita basa rayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro ekuvhura yako iPhone ne mask uye Apple Watch
Iyo nyowani "Apple Kadhi Mhuri" inowanikwa mune iyo iOS 14.5 kodhi